Ihe ị ga-ahụ na Andorra n'ime ụbọchị 2 ma ọ bụ 3 | Akụkọ njem
Mariela Carril | | Andorra, Ihe ị ga-ahụ
El Isi nke Andorra Ọ dị n'etiti Spain na France na ọ bụ obere obodo nwere ikike nke ókèala ya na-erughị kilomita 500. Ruo ogologo oge ọ dara ogbenye na enweghị mmepe, mana n'etiti narị afọ nke XNUMX, ọganihu njem nlegharị anya malitere na ebe ọ na-aga gbanwere.
Taa, na Actualidad Viajes, ihe ị ga-ahụ na Andorra n'ime ụbọchị 2 ma ọ bụ 3.
2 Ụbọchị mbụ na Andorra
3 Ụbọchị nke abụọ na Andorra
4 Ụbọchị nke atọ na Andorra
Dịka anyị kwuru, ọ bụ obere ọchịchị ka ahaziri n'ime parish asaa. Onu ogugu ya anaghi eru 80 puku ndị bi na ya isi obodo bụ Andorra la Vieja. Ọ dị na Pyrenees na ebe Lleida bụ ókè ya na Spain, Ariège na Eastern Pyrenees kewapụrụ ya na France.
Asụsụ obodo ya bụ Catalan, ma n'ụzọ doro anya, site na ndị agbata obi ha, Spanish na French bụ asụsụ ndị ọzọ nke abụọ. Ókè ya bụ ugwu ugwu na ọnụ ọgụgụ kasị elu ya bụ Comapedrosa, nke nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 3.
Nwee obi ụtọ na a Mediterranean na oké osimiri ihu igwe Ma ka ọ na-enwe oge okpomọkụ dị nro, oge oyi ya na-atụ nnọọ oyi, ya mere egwuregwu oyi bụ usoro nke ụbọchị ma bụrụ eze zuru oke nke njem nlegharị anya.
Ụbọchị mbụ na Andorra
Ihe mbu, Kedu ka ị ga-esi ruo Andorra? Enweghị ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ ụgbọ oloko na-etinye uche n'otu nhọrọ Enwere ike isi n'okporo ụzọ si Spain ma ọ bụ si France nweta. Ị nwere ike iji ụgbọ ala si Barcelona rutere ebe ahụ n'ime awa ole na ole nke ọmarịcha ọdịdị ala. Ozugbo ị banyere, ị nwere ike ịgbazite ụgbọ ala, nwere akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala mba ụwa, ma ọ bụ jiri tagzi ma ọ bụ bọs bugharịa.
Ọ bụrụ na ịgaghị n'oge dị elu, ị gaghị enwe nsogbu ịchọta ebe obibi, mana ọ bụrụ na ị na-aga n'oge ski, ọ kacha mma ịde akwụkwọ nke ọma tupu oge eruo. Ma ugbua ee, gịnị ka ị ga-eme na Andorra?
Ọ bụrụ na ị na-anọ n'isi obodo, ihe mbụ ị ga-eme bụ ịga ije na mara ya. Ọ nwere ama akwa na ihe oyiyi elekere, oku The Noblesse du Temps, nke bụ kaadị ozi kacha ochie. Ọ bụ ọrụ nke Dali na n'azụ ya bụ Pont de Paris a ma ama, nke emechara na 2006, n'osimiri Gran Valira nke na-agafe ọtụtụ ndị isi.
Andorra ọ bụ paradaịs ịzụ ahịa, enweghị ụtụ isi, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nnukwu ụlọ ahịa, yabụ ị nwere ike iji ohere wee zụta ihe dị ọnụ ala. Taa, etiti obodo, Escaldes, ya na Avinguda Carlemany, abụrụla nke ejirila ọtụtụ ụlọ ahịa na ụlọ nri dị n'akụkụ abụọ na-agafe. Ebe ịzụ ahịa a ma ama bụ nke Pyrenees, ebe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị niile a kacha mara amara dị. Gaa n'ihu n'okporo ụzọ Meritxell, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwara akwara na-emecha bụrụ Carlemany ka ịgafechara osimiri ahụ.
N'ezie, echela na na Andorra ị ga-azụta Gucci ma ọ bụ Prada, ebe a ọ bụ ihe ndị ọzọ banyere ewu ewu ụdị na. ịzụ ahịa n'ụlọ ahịa na ọnụ ahịa ndị ọzọ enwere ikeEe, ọ bụghị paradaịs nke ụdị dị oke ọnụ na ọnụ ala dị ọnụ ala. Na gafere uwe na ngwa, kwa ị nwere ike ịzụta nri na ụtaba. Mgbe ndị isi niile na-emepụta ụtaba, ọ ka nwere ike ịhụ ihe ọkụkụ, na ọbụna nwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ị nwere ike ịga.
Otu n'ime ụlọ ndị a kacha mara amara bụ Caldea Spa, dị ka katidral. Meghere na 2013, Ọ nwere ala iri na asatọ na ọ bụ ọkaibe nke ukwuu na m ga-ekwu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkọ sayensị. Enwere ọdọ mmiri thematic: bath Roman, ịsa ahụ Aztec, ọdọ mmiri oyi oyi nke Icelandic, hamman na enweghị ụkọ egwu abalị na ihe ngosi laser.
O nwere ngalaba a maara nke ọma na nke ọzọ maka ndị okenye a na-akpọ Inuu na ihe dị ka puku mmadụ 400 na-eleta ya kwa afọ. Enwere ngafe awa atọ, ngafe otu ụbọchị na ngafe ọtụtụ ụbọchị. Chọpụta ihe kpatara enwere ụfọdụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ gụnyere ịnweta spa a magburu onwe ya.
Na ịgagharị n'isi obodo, ịzụ ahịa na ịgagharị, ị nwere ike ịnọ jụụ otu ụbọchị.
Ụbọchị nke abụọ na Andorra
Oge erugo pụọ n'obodo na isi n'ebe Pyrenees. Nke hikes Ha bụ nnukwu nhọrọ, ma ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịga n'oge okpomọkụ. Andorra nwere ụzọ akara 54 ime njem ma ọ bụrụ na-amasị gị echiche, ị nwere ike ịzụta ntuziaka "The ụzọ Andorra" na ọ bụla njem nleta ụlọ ọrụ maka gburugburu 5 euro. Naanị kilomita ole na ole ewepụtalarị ọmarịcha echiche nke obodo ahụ n'ebe dị anya.
Otu n'ime ụzọ ndị kasị dị egwu ime bụ nke na-agafe Paso Maiana, site na Ndagwurugwu Madriu-Perafita, Ihe Nketa Ụwa. Ọ bụ ezie na ọ kachasị mma, ọ bụghị nke kachasị mfe ma ọ bụ ezie na a na-ekwukarị na a na-eme ya n'ihe dị ka awa ise, ọ na-eji nwayọọ na-ewe ihe karịrị asaa.
Enwere njem ndị ọzọ dị mfe ma ọ bụ dị mkpụmkpụ, dịka ọmụmaatụ nke ị nwere ike ime site Andorra la Vieja ruo Erts. La Site ferrata nke Sant Vicenc d'Enclar Ọ na-ewega gị n'elu nke ndagwurugwu ahụ ma na-enye echiche mara mma nke isi obodo. Ọ ga-abụ awa abụọ kacha.
Njem ndị ọzọ bụ nke ndị ahụ mere Canillo Valley na Incles, na ọnụ ọgụgụ ya Siscaro na Escobes na ụzọ na-aga Lake Juclar, nke kasị ukwuu na Andorra. Ije ije na oyi bụ Ogige ntụrụndụ nke Sortney. Ma ee, ị nweghị ike ịkwụsị ịga na Ebe panoramic nke Roc del Quer, kwụsịtụrụ 12 mita n'elu ndagwurugwu na obere akụkụ nke nwere iko ala, adịghị adabara ndị na-ata ahụhụ site na vertigo. N'ezie, ị nwere ike ịdebanye aha maka njegharị a haziri ahazi.
N'oge oyi, ihe niile na-adabere na ski. N'ịbụ nke dị n'ịdị elu nke mita 2, e nwere ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ruru mita 3, ya mere ọ bụ obodo ugwu dịka Switzerland ma ọ bụ Bhutan.
Na mkpokọta Andorra nwere 110 lifts ma ị nwere ike ibuga ihe dị ka 156 puku skier kwa elekere gaa na mkpọda ya dị kilomita 303. Enwere ọtụtụ ebe ntụrụndụ na ohere maka ịgba ski, ịkwọ ụgbọ mmiri, sledding nkịta, ịkwọ ụgbọ mmiri, na ndị ọzọ.
Afọ ole na ole gara aga, ebe ntụrụndụ abụọ kachasị mkpa gbakọtara wee mepụta Gran Valira, ebe egwuregwu ski kasị ukwuu n'ụwa nwere mkpọda 118 na mkpọda 210 kilomita., yabụ were ya. Ọ bụrụ na ịchọghị iche n'echiche ya ma chọọ iji anya gị hụ ya mgbe ahụ ndụmọdụ bụ ịgbazite helikopta wee were nkeji ole na ole gafee ikuku iji nwee ọmarịcha ugwu. Ma ọ bụrụ na-amasị gị ịnọ n'ala, ị nwere ike were onye nduzi ọkachamara were gị gafee ugwu.
Ụbọchị nke atọ na Andorra
Iji mechie njem ahụ na Andorra, ị nwere ike ime ihe dị jụụ ma rara onwe gị nye ịgagharị n'ókèala ahụ ntakịrị ekele ya omenala, ya gastronomy na ya ihe owuwuka. Nkà na ihe owuwu nke Romanesque dị, ọkachasị n'ụka ya.
Enwere gburugburu 40 ụka nke Middle Ages na ị nwere ike inyocha na obere njem ụgbọ ala. N'ezie, nweta map iji chọta ebe ị ga-aga nke ọma ma buru n'uche na okporo ụzọ ahụ nwere ike ibu ifufe. Oge kacha mma n'afọ ime ụdị njem mmụta a bụ n'oge okpomọkụ, ma ọ bụghị naanị n'ihi ihu igwe, kamakwa n'ihi na ọtụtụ n'ime ụka na-emeghe. N'oge oyi, ọ dịkarịa ala, a na-emechi ndị ọbịa na ndị dị ntakịrị. Ụlọ ọrụ njem nlegharị anya Andorran nwere ike inye gị ozi ndị ọzọ iji nyere gị aka ịhazi ihe nke ọma.
Mana rịba ama aha ndị a: Churchka nke Sant Climent de Pal, otu n'ime ndị kasị ochie na ndị isi, site na narị afọ nke XNUMX ma ọ bụ XNUMX, nke nwere ụlọ elu mgbịrịgba nke okpukpu atọ na windo enyo mara mma; nke Churchka nke Sant Miquel d'Engolasters, ọmarịcha ụlọ nsọ Romanesque nke a maara maka eserese ya na eserese ya, taa ọ bụ ihe oyiri ebe ọ bụ na mbụ dị na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie dị na Barcelona, ​​​​site na narị afọ nke XNUMX; nke Churchka nke Sant Antoni de la Grella, obere ma n'ebe dị n'etiti ugwu mara mma; nke Churchka nke Santa Eulalia d'Encamp, ya na ụlọ ngosi ihe ngosi nka nke nka dị nsọ ma ọ bụ obere Sant Martí de Nagol kpọgidere na mgbidi nkume
Ee ị nwekwara ike ileta ụlọ ihe ngosi nka, ọ bụghị ihe niile bụ ọdịdị na ụka: na Ụlọ Arenys Plandolit, ihe ngosi nka ethnographic taa, na Ụlọ ihe ngosi nka ụtaba, nke na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ochie, nke Ebe ntụgharị okwu Romanesco, nke Carmen Thyssen Andorra Museum, nke nka nka.
N'ikpeazụ, ị gaghị ahapụ Andorra na-agbalịghị nri ya. Gastronomy ya bụ nke siri ike ma dị ụtọ. Maka nri ehihie ị gaghị agbaghara nleta na a mbadamba, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ugwuỊna na nkume mgbidi, nnukwu ihe mgbochi megide ifufe na snow. N'ebe a, menu bụ isi ihe mejupụtara efere anụ na akụkụ buru ibu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Andorra » Ihe ị ga-ahụ na Andorra n'ime ụbọchị 2 ma ọ bụ 3
Ndụmọdụ maka njem ụgbọ ala Ista a